China iAluminiyam ipaneli-ya103 abavelisi kunye nabathengisi Yingjiwei
Iimpawu zepaneli yealuminium
3. I-Aluminium i-ductile kwaye inendawo ephantsi yokunyibilika, Isivumela ukuba senze ngokulula iipaneli zealuminium kwiimfuno zeprojekthi. Inokuqhubekekiswa kwiimilo ezintsonkothileyo kuyilo ngalunye
6. Kulula ukuyifaka. Iphaneli yodonga lwealuminium yaqwalaselwa kumzi-mveliso yaze yalungiswa kwisakhelo ngaphandle kokusika kwindawo yokwakha.
Iphaneli yeAluminiyam ubukhulu becala yenziwe yiphaneli, ukuqina, ikona yealuminiyam kunye nezinye izinto. Luhlobo olunye lwezinto zokuhombisa zokwakha, ezisebenzisa ipleyiti ekumgangatho ophezulu yealuminium njengezinto ezisisiseko, emva koko ziqhubeke kubukhulu obulungelelanisiweyo, ubukhulu kunye nobume obunzima kunye nonyango olwahlukileyo kumphezulu, ukutyabeka i-fluorocarbon lukhetho lokuqala. Inkqubo ukupeyinta yahlulwe ngokubanzi ukutyabeka kabini, ukutyabeka ezintathu okanye ukutyabeka ezine. Ukutyabeka kweFluorocarbon kunokumelana ngokugqwesileyo nokumelana nemozulu, kunokumelana nemvula eneasidi, ukutshiza ityuwa kunye nongcoliseko lomoya olwahlukeneyo, ukubanda okuhle kunye nobushushu, kunokumelana nemitha eyomeleleyo ye-ultraviolet, kunokugcina ixesha elide kungapheli, kungabi ngumgubo, ubomi benkonzo ende.
Igama lemveliso Iphaneli yeAluminiyam
Into No. YA103
Unyango oluphezulu Ukutyabeka kwe-PVDF / ukutyabeka Powder / ukuprinta kwe-Anodized / UV, ukukrala
Umbala Nawuphi na umbala weRAL, imibala eqinileyo, imibala yentsimbi, ingqolowa yeenkuni, imark marble kunye nelitye
Okulandelayo: Iphaneli egqunyiweyo-YA313